Kudzivirira kweSliding mune Yakagara Inofamba - Wiricheya Kupokana -Kutsvedza
Kune nzira dzakasiyana dzekuzvikuvadza kana uchitsvedza mune wiricheya chigaro. Kutsvedza pachigaro mhedzisiro yekumiswa zvisina kumira zvakanaka kushandisa a wiricheya. Kune akawanda kufamba nyaya dzinogona kuitika kana kutsvedza kwaitika, kugaya uye / kana kufema kunogona kudzivirirwa uye kunogona kukonzera kurwara kwenguva refu. Uyezve, kana kutsvedza kuchiitika wakagara, zvigaro zvepamusoro zvinogona kutadziswa kufamba.
Kana kutsvedza kuchiitika pane wiricheya, iwe unogona zvakare kutambura nekuparara kweganda uye kumanikidza maronda. Izvi zvinogona kukonzera kurwara kwenguva refu nevanhu vanogona kunge vaine hunyoro hweganda nyaya, senge dermatitis. Imwe nyaya nekutsvedza ndeyekuti mushandisi anozoda kumiswazve nemuchengeti nguva dzese pavanenge vari munzvimbo isina kugadzikana, izvo zvingave zvisina basa kune chero munhu.
Kupokana -Kutsvedza muWheelchair
Kutsvedza kunogona kuve iri nyaya yakakomba kana zvasvika pakukuvara kwemuviri uye kudonha pachigaro, zvakanyanya kukuvadza iwe mukuita. Iwe unofanirwa kufunga nezvemitemo yefizikiki, zvinhu zviri panzvimbo yakamira zvinowanzo gara zvakadaro, asi zvinhu zviri kufamba zvinoramba zvichimhanya. Zvichireva kuti paunenge uchirwara nekutsvedza pachigaro checheya, pane mukana wakawanda wekuti uchatsvedza kubva pachigaro kana watove munzvimbo yakaipa.
Pane chenjedzo huru yakaiswa mazuva ano kana zvasvika pakurwisa kutsvedza mu wiricheya. Izvi zvinosanganisira sarudzo senge dzekumhanyisa kugadzirisa, kana Bhendi-Aids senge kusimudzira zororo remakumbo, makushoni akafanana neakakomberedzwa, isina kutsvedza pamusoro penzvimbo yechigaro, uye nedzimwe nzira dzekugadzirisa dambudziko.
Ergonomic Wiricheya akakura eAnti-Slippage
Teerera izwi rekuti "zvenguva diki" muchirevo chakapfuura, nekuti zvechinguva zvinogona kungoreva kuti nyaya yacho ichakandirwa pachinhu chinopisa musana kana imwe yeizvi zvinokurumidza kugadzirisa zvashanda. Asi mukufamba kwenguva, mhinduro idzi dzaisazoshanda nekuti hausi kunyatsogadzirisa mudzi wedambudziko.
Mhinduro yenguva refu yenyaya yekutsvedza haisi imwe kunze kweKarman's Ergonomic Mawiricheya. Nekuti chigaro chakagadzirirwa kudzivirira kutsvedza chaiko kana uchinge wabuda mubhokisi. Chikamu chikuru pamusoro peizvi ndechekuti inopa yepamusoro pekugara furemu inoitirwa kuve yakagadzikana kune mushandisi munguva refu.